Raiisal Wasaaraha Somaliya oo isha ku haaya natiijada kulanka berrito ee Baarlamaanka - iftineducation.com
iftineducation.com – Wararka ka imaanaaya Magaalada Muqdisho, ayaa waxay sheegayaan in Wasiirka 1-aad ee Xukuumada C/weli Sheekh Axmed, uu isha ku haayo kulanka berrito lagu wado in uu yeesho Baarlamaanka.
Sida uu horeyba u shaaciyay Guddoonka Sare ee Baarlamaanka, maalinta Talaadada waxaa Xildhibaanada Baarlamaanka loo qaybin doonaa mooshinka ka dhanka ah Xukuumada Somaliya. Sidoo kalana maalinta Sabtida ay ka doodi doonaan mooshinka kalsooni kala noqoshada ee Ra’iisal Wasaaraha.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa la soo sheegayaa in uu ka fikiraayo in uu xilka iska casilo, haddii buuq iyo sawaxan la’aan ay Xildhibaanadu ku qaataan nuqulada uu ka kooban yahay mooshinka.
Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, ayaa rumeysan in garabka Madaxweynaha Somaliya uu heli doono saddex meelood laba meel codadka Xildhibaanada Baarlamaanka, taasina ay fududeyneyso in Xukuumadu ay dhacdo.
Muqdisho waxaa ku sugan in ka badan 230 Xildhibaano oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya, oo wadartiisu guud ay ka kooban tahay 275 Xildhibaano. Intoodu badan waxaa lagu tiriyaa inay la safan yihiin Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dadka odoroso Siyaasada Somaliya, ayaa waxay qabaan in Madaxweynaha Somaliya uu heli doono cododka 139 Xildhibaano, taa oo ah midda ugu yar ee xilka uu ku weyn karo Ra’iisal Wasaaraha.